IPluto TV: izoqala ukukhombisa iziteshi ezinhlanu zamahhala ezintsha | Kusuka kuLinux
Isaka | | Aplicaciones, Izaziso
Okwalabo abangakakwazi okwamanje, I-Pluto TV iyinhlangano yesikhulumi sevidiyo esakaza i-ViacomCBS. ICalifornian yasungulwa ngonyaka we-2013, futhi selokhu yasungulwa, ibilokhu ikhula ngenani labalandeli, ngoba enye yezinzuzo zayo ezinkulu ukuthi imahhala, ngaphandle kwemali yokubhalisa efana neNetflix, i-Amazon Prime Video, iDisney +, i-Apple TV + , FlixOlé, njll.
Ngaphezu kwalokho, ayizange iyidebeselele le nsizakalo, njengoba kwenzeka ngamanye amapulatifomu amahhala ashiya ungathandeki. Kulokhu, okuqukethwe kwepulatifomu kuqhubekile nokwanda, futhi kuzoqhubeka nokukhula, kusukela Kusukela ngoMashi 1, uzokwazi ukubuka iziteshi ezintsha ezinhlanu ukwenza ngcono ukunikezwa kwethelevishini okuvele kunabile. Lokho kuzosho uchungechunge lokugqwayiza oluningi, umculo, imibukiso yangempela, njll, ngamafuphi, kumnandi nokuqukethwe ...
Ngaphezu kwalokho, iPluto TV nayo ifuna ukukhonjiswa okuqukethwe okusha esiteshini sochungechunge lwe-Pluto TV, ngezinkathi ezimbili zokuqala ze- Umngani omkhulu, ukuguqulwa kochungechunge lwemibhalo Abangani ababili ngu-Elena Ferrante. Isizini yokuqala izoba ngoLwesibili, Mashi 16, kuthi eyesibili ibe ngoLwesibili, Mashi 22, esigabeni se-On Demand sale nkundla.
Iziteshi ze-Pluto TV
Uma kunezelwa lezi ziteshi ezi-5 ezintsha, sezivele zengezelelwa kokungenani ngaphansi Iziteshi ezingama-55 ziyatholakala ku-Pluto TV kusuka ngoMashi 2021. Inani elingacatshangwa nge-a ipulatifomu yamahhala.
Futhi uma uzibuza ngezindaba, uhlu lweziteshi ezingeziwe kube:
Zidonsela isilo: isiteshi esisha se-thematic esizinikezele kulolu hlelo oluthandwayo lwe-pawn lokuthi manje ungabuka kwezinye iziteshi, nokuthi ungalandela amahora angama-24 kulesi siteshi.
Pluto TV Action Izingane: isiteshi esinikezelwe kokuqukethwe kwezingane, sabancane. Ngopopayi futhi ngesithombe sangempela. Isibonelo, ungabuka uchungechunge oludumile lweNickelodeon, njenge I-Avatar: Inganekwane ye-Aan'g, The Legend of Korra, The Ninja Turtles, Njll
I-RiCH: Yindawo yokulandela imibukiso yangempela ye-MTV ephumelelayo.
UPluto TV Uphenya: esinye isiteshi esisha esizofika ngoMashi 22, nalapho uzokwazi khona ukubona imibiko yezimfihlakalo, ubugebengu, njll.
I-Clubbing TV: ekugcineni, lesi siteshi sibhekiswe kubathandi bomculo we-elektroniki. Abathandi bomculo bazoba nemibukiso yomculo ezandleni zabo amahora angama-24 ngosuku, ngemikhosi edumile efana ne-Heart Ibiza, iBig Bang Festival, iSònar Reykjavik, Kappa FuturFestival, Maneless Music Festival, njll. Kulokhu, kuzofanele futhi silinde isikhashana, kuze kube uMashi 22.
Isinyathelo esisha sokuya phambili sePluto TV, nasezinhlosweni ze ukufinyelela iziteshi 100 ngo-2021 ezazimakwe ngaphambi kokuphela konyaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IPluto TV: izoqala ukukhombisa iziteshi ezinhlanu zamahhala ezintsha